VR Technology ဆိုတာ ဘာလဲ ? | Thetys Blog - Thetys
VR Technology ဆိုတာဘာလဲ?
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ VR Technology ဆိုတာကတော့ Virtual Reality ကို အတို ကောက်ခေါ်တာပါ။ Computer , Display , Headsets, အာရုံခံ ပစ္စည်းများ ကိုပေါင်းစပ်ပြီး တော့အသုံးပြုသူကို Simulated Reality (ပတ်၀န်းကျင်အတု) ကိုဖန်တီးပေးပြီး အသုံးပြုတဲ့ App ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာရုံကိုလှည့်ဖြားပြီးပတ်၀န်းကျင်အတုကိုအစစ်ကဲ့သို့မြင်အောင်ဖန်တီးပေး တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
Simulated Reality (ပတ်ဝန်းကျင်အတု)ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင် တကယ်ရှိတဲ့ နေရာ၊ လက်ရှိအချိန်တို့အပြင် တကယ်မရှိတဲ့နေရာ၊ လွန်ခဲ့ပြီးသောအချိန်ကို 3D digital နည်းနဲ့ sound system ကို အသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့ စိတ်ကူးသက်သက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ပါဝင်ပါတယ်။
VR ကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ Training များ ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာTraining များ နဲ့ ဖျော်‌ဖြေရေး‌ များ(ဥပမာ- video games)မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
ယခင်ကမူ အကုန်အကျအလွန်များ၍ စစ်ဘက်ဌာနများတွင် တိုက်ပွဲ အတုများဖန်တီးခြင်း၊ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်‌‌ မောင်းနှင်ခြင်း၊ Education Researchများတွင်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ယခုအခါတွင်မူ VR နည်းပညာဖြင့် မိမိတို့ smart ဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်‌ သော VR headsets များကို အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်နေကြပါပြီ။
VR မှာလိုအပ်တာတွေကတော့ အသံနဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။ မြင်ကွင်းကနေတစ်ဆင့် ဖန်တီးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုထဲထိဆွဲခေါ်သွားပြီး VR headsetထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သူနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ sensor တွေကိုသုံးပြီးတော့ interact လုပ်နိုင်မှာပါ ။ VR technology နဲ့သာဆို virtual လေယာဉ်တွေနဲ့ pilots တွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးနိုင်သလို၊ စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံရအောင် စစ်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VR နဲ့ AR ဘာကွာသလဲဆိုရင်
အများစုကတော့ VR ကို AR (Augmented Reality)နဲ့ မှားတတ်ကြပါတယ်။ VR ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ် အတုအယောင်ဖန်တီးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲကိုဆွဲခေါ်သွားပြီး interact လုပ်ခိုင်းတာပါဘဲ။ AR ကတော့ လက်ရှိကိုယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတုအယောင်ပစ္စည်းတွေ ဆွဲခေါ်လာပြီး မျက်စိရှေ့မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်စေတဲ့ နည်းပညာပါပဲ (ဥပမာ-Pokemon Go)
VR Technology ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး
သူ့ ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ သဘာဝသမိုင်းပညာ၊ သိပ္ပံပညာ စသည်တို့ကို ယခင်ကလို စာသင်ခန်းထဲမှာသာ လေ့လာနေရခြင်းမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ စာသင်ခန်းအပြင်ဘက်က ကမ္ဘာ့ အခြားတစ်ဖက်ကိုပါ သွားရောက်လေ့လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး ပညာရေးစနစ်များ တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲလာတော့မှာပါတယ်။
VR apps တွေအသုံးပြုပြီး တစ်ခါမှမတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်မှာ ရေကူးတာတို့၊ Mars ဂြိုလ်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တာတို့ကို တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ Oculus Rift, Google Cardboard နဲ့ HTC Vive တွေကတော့ VR နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း VRကို အစပျိုး အသုံးပြုနေကြပါပြီ။
နည်းပညာပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ နောက်ကျနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ယခု ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ အံ့မခန်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းသုံးသူဦးရေ၊ Social network, internet access ရှိသူဦးရေ၊ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများ၊ ပြည်ပဈေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရာခိုင်နှုန်းများစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်တွေ့ကဏ္ဍမှာ VR နည်းပညာက လွန်စွာအသုံးဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားကလေးတွေ လုံခြုံရေးအတွက် စိတ်မပူရဘဲ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုများပြုလုပ်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
VR မှာ “အကွာအဝေး နဲ့ အချိန် မရှိဘူး”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အပြင်လက်တွေ့လောက မှာ မဖြစ်နိုင်သော အရာတွေကို VRကို အသုံးချပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ပုဂံ ငလျင်မှာ ပြိုကျပျက်စီးသွားရတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စေတီပုထိုးများနဲ့ နှစ်ရာချီနေပြီဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တွေကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် အလွန်နီးကပ်စွာ မြင်နိုင်တော့မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရနေရာတချို့ကို VR ကို အသုံးချပြီး သွားရောက် လည်ပတ်၍ ရနေပါပြီ။VR နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ game တစ်ခုထက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဈေးကွက်ဖြန့်ချီသည့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်း တစ်ခုထက် ပိုလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းတွင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ဒွန်တွဲနေတတ်သည်ဖြစ်ရာ VR အသုံးပြုလျှင် ကောင်းကျိုးများသာမက ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဥပမာအနေဖြင့် အလုပ်မလုပ်ဘဲ ရုပ်ရှင်ရုံတွင်သာ တနေကုန် တနေခမ်း ထိုင်ကြည့်နေသကဲ့သို့ အတိုင်းအဆ မရှိဘဲ VR ကမ္ဘာထဲတွင်သာ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုပါက မျက်ရိုးများကိုက်၊ ခေါင်းများနောက်ကာ ကျန်းမာရေးကို လွန်စွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
သို့ပါ၍ တန်ဆေး လွန်ဆေး ဆိုသည့် စကားပုံအတိုင်း သေချာစွာ ချင့်ချိန် အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ VR နည်းပညာမှာ နောက်နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ လူသားတွေအပေါ်ကို ဖျော်ဖြေရေးသက်သက် ဆိုတာထပ်ကို ပိုလွှမ်းမိုးလာတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။